CFA VS. တကြ် CPA - ဘယ်အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်သည် သာ. ကောင်း၏ဖြစ်ပါသည်? [It'saClose Call]
တကြ် CPA vs CFA: သငျသညျများအတွက်အကောင်းဆုံးအရာဖြစ်တယ်?
23 သြဂုတ် တကြ် CPA vs CFA: သငျသညျများအတွက်အကောင်းဆုံးအရာဖြစ်တယ်?
Updated:အောက်တိုဘာလ 15, 2018
ဘဏ္ဍာရေးအတွက်ပညာရှင်များမကြာခဏ၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များတိုးတက်နိုင်ရန်အတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အချင်းများကိုလိုက်. သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (တကြ် CPA) နှင့် Chartered ဘဏ်ဟာ Financial Analyst (CFA) ဆွေးနွေးငြင်းခုံသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်များတွင်နှစ်ခုအရှိဆုံးဂုဏ်သတင်းခေါင်းစဉ်များမှာ. ခြားနားချက်များဘာတွေလဲ, နှင့်အရာတစျခု သာ. ကောင်း၏? နှစ်ခုအကြားအဓိကကွာခြားချက်အဘယ်အရာကိုတစ်ဦးချင်းစီအနေအထားဖုံးလွှမ်းနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများရှိပါသည်. တကြ် CPA "စာရင်းကိုင်အတွက်အနက်ရောင်ခါးပတ်" ဖြစ်စဉ်းစားခြင်းနှင့်စာရင်းကိုင်နှင့်စာရင်းစစ်အတွက်အလုပ်အကိုင်များဘို့သင့်ကိုပြင်ဆင်နေပါတယ်, သော်လည်း, CFA အစီအစဉ် Corporate ဘဏ္ဍာရေးနှင့်တူကျယ်ပြန့်သည့်အကြောင်းအရာများဖုံးအုပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်နေကြပါတယ်, အစုစုကိုစီမံခန့်ခွဲမှု, အနကျအဓိပ်ပါယျ, Fixed ဝင်ငွေခွန်, အခြားရွေးချယ်စရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ်လုပ်ငန်းအတွက်အလုပ်အကိုင်များဘို့သင့်ပြင်ဆင်, အစုစုကိုစီမံခန့်ခွဲမှု, ဘဏ္ဍာရေးသုတေသနစသည်တို့ကို. အဲဒီအစားအရာသည် သာ. ကောင်း၏ "အဲဒီဤမေးခွန်းကိုမေးခြင်းထက်?", သင်တို့အဘို့ သာ. ကောင်း၏ရာဖြစ်ပါတယ် "တောင်းဆိုနေတာရပါမည် သငျသညျ".
တစ်ဦး CFA ကဘာလဲ?
တကြ် CPA vs CFA: အဆိုပါလျှောက်လွှာ
CFA သို့မဟုတ်တကြ် CPA: စာမေးပွဲအကြောင်းအရာနှင့်စီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ
တစ်ဦးကတကြ် CPA Non-အများပြည်သူစာရင်းကိုင်များအတွက်သတ်မှတ်ရေးဖြစ်ပါသည်, အခွန်စာရင်းကိုင်, ၎င်းတို့၏အရေအတွက်ကိုအကြပ်အတည်းကျွမ်းကျင်မှုထေူတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုရှာသောသူနှင့်ဘဏ္ဍာရေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ. တစ်ဦးကတကြ် CPA လည်းခေါင်းစဉ်အထူးစေသည်ထားတဲ့စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာကိုလက်မှတ်ရေးထိုးရန်ပြဌာန်းအခွင့်အရေးများရှိပါတယ်. အဆိုပါ AICPA အဆိုအရ, CPAs အကြမ်းဖျင်းဝင်ငွေ 10-15% သူတို့ Non-အထောက်အထားများစာရင်းကိုင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလုပ်မလုပ်ကိုစတင်တဲ့အခါမှာပိုပြီး. ဒါ့အပြင် CPAs Non-CPAs ထက်အလုပ်ရှင်များမှပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်. အဆိုပါ U.S အဆိုအရ. အလုပ်သမားစာရင်းအင်းဗျူရို (BLS), စာရင်းကိုင်နှင့်စာရင်းစစ်အလုပ်အကိုင်, အခြားအစာရင်းကိုင်ပညာရှင်များအကြားတကြ် CPA ရဲ့ပါဝင်သော, အားဖြင့်ကြီးထွားဖို့ projected ခဲ့ကြသည် 13 အကြားရာခိုင်နှုန်းကို 2012 နှင့် 2022.
အဆိုပါ CFA ခေါင်းစဉ်ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ရွှေစံနှုန်းဖြစ်ပြီး. သငျသညျရှယ်ယာသုံးသပ်သူများအဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ရန်ပုံငွေမန်နေဂျာများ, ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုသို့မဟုတ်စောင်ရန်းကိုရန်ပုံငွေအိမ်များနှင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ, ဤသူသည်သင်တို့ရနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်. CFAs ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်.
CFAs ၏ထိပ်အလုပ်ရှင်များကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးလေးစားဖွယ်ဘဏ္ဍာရေးကော်ပိုရေးရှင်းတို့ပါဝင်သည်, ကဲ့သို့, JPMorgan, Citigroup, အမေရိကဘဏ်၏, နှင့်ဝဲလ်တဖက်.
ဤအရာအတော်များများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ်တွေရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့် CFA အစီအစဉ်တစ်ခု Practitioner ၏ရှုထောငျ့ကနေကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်အကိုင်အများဆုံးသက်ဆိုင်ရာအသိပညာနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုစထက်ကျော်လွန်သွား.
ထို CPA ခေါင်းစဉ်များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီစံအားလုံးဘဏ္ဍာရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်အရည်အချင်းများတို့တွင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီး. သငျသညျအနညျးဆုံး 4-တစ်နှစ်ဘွဲ့ဒီဂရီများနှင့်အများဆုံးကိစ္စများတွင်ရှိရမည်, 150 အကြွေးဝယ်နာရီ (နှင့်ညီမျှတယ်5အဆင့်မြင့်ပညာရေး၏အနှစ်) စာမေးပွဲဖြေဆိုဘို့ထိုင်ဖို့. အဆိုပါတကြ် CPA လိုင်စင်၏အသီးအသီးတို့ကခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 55 အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပြည်နယ်သို့မဟုတ်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်. အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် entry ကိုမြင့်မားအတားအဆီးများနှင့်ရှုပ်ထွေးလျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ်၏, ဒါဟာအတော်လေးတစ်စိန်ခေါ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါ CFA CFA Institute ကခွင့်ပြုခဲ့တဲ့သတ်မှတ်ရေးဖြစ်ပါသည်, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ non-profit အဖွဲ့အစည်းက. အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းသည်အမေရိကန်အခြေစိုက်, ဒါပေမဲ့ရှိပါတယ်3ဒေသဆိုင်ရာရုံးများနှင့် 200 local chapters around the world. သငျသညျအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့သည်သိပ္ပံနှင့်အသုံးချပရိုဂရမ်မှတဆင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်. နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်တစ်ဦးဘွဲ့ဒီဂရီရှိသည်အဖြစ် (မဟုတ်သေချာပေါက်4နှစ်ပေါင်း), သင်စာမေးပွဲဖြေဘို့ထိုင်နိုင်ပါတယ်. သင်ပင်ဘွဲ့ရရှေ့တော်၌ထိုစာမေးပွဲတွင်ယူနိုင်ပါသည်
အဆိုပါတကြ် CPA စာမေးပွဲရှိပါတယ်4စာမေးပွဲဖြေဆိုကဏ္ဍများ: ဘဏ္ဍာရေးစာရင်းကိုင် & အစီရင်ခံ, ငှေစာရငျးစစျဆေး & သခေံခ, စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် Business ပတ်ဝန်းကျင် & အယူအဆ. စာမေးပွဲဖြစ်ပါသည် 100% မျိုးစုံရွေးချယ်မှုမေးခွန်းများကိုပါဝင်သည်ဟု computerized, အလုပ်တခုကို-based Simulator (ဖြစ်ရပ်တခု), နှင့်စာဖြင့်ရေးသားဆက်သွယ်ရေး. သင်ကယူရွေးချယ်နိုင်သည်4တစ်ကြိမ်မှာစိတျအပိုငျးတစျခု,2တစ်ကြိမ်, သို့မဟုတ်ပင်4တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ. သင့်အနေဖြင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုဘို့တကြ် CPA စာမေးပွဲစစ်ဆေးမှု window ထဲမှာဘယ်အချိန်မဆိုထိုင်နိုင်ပါတယ်, ပထမဦးဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ်2တစ်ခုချင်းစီကိုလေးပုံတပုံနှင့်အမေရိကန်တလျှောက်လုံးမည်သည့် prometric စင်တာများမှာလပေါင်းများစွာ. ဂျပန်တွင်စမ်းသပ်စင်တာများလည်းရှိပါတယ်, ဘရာဇီးနှင့်4အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများတွင်.
အများစုမှာပြည်နယ်ပျဉ်ပြားန်းကျင်လိုအပ် 1 လိုင်စင်ရတဲ့မတိုင်မီစာရင်းကိုင်အတွေ့အကြုံ၏တစ်နှစ်, အများစုပြည်နယ်များအဘို့ဤအတွေ့အကြုံတစ်ခုတက်ကြွစွာတကြ် CPA အားဖြင့်ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်စစ်ဆေးအတည်ပြုခံရဖို့ဖြစ်ပါတယ်.
အဆိုပါ CFA စာမေးပွဲပုံစံကိုအများကြီးလျော့နည်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ပါသည်. ရှိပါတယ်3စာမေးပွဲတွင်၏အဆင့်ဆင့်, သငျတို့သနောက်တစ်နေ့မှအပေါ်ကိုရွှေ့ဖို့သင့်လျော်နိုင်ရန်အတွက်သူတို့ကိုဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်. စာမေးပွဲဘဏ္ဍာရေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အစုစုကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအစားစာရင်းကိုင်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေသည်, စာရင်းစစ်များနှင့်အခွန်အကောက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ. အဆိုပါစမ်းသပ်မှုအဆင့်များအတွက်တစ်နှစ်နှစ်ကြိမ်အုပ်ချုပ်နေသည် 1, နှင့်အဆင့်များအတွက်တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်2နှင့် 3. အဓိကမြို့ကြီးများနှင့်မြို့ပြဒေသများရှိ CFA စာမေးပွဲဖြေဆိုဘို့များစွာသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်ခြင်းစင်တာများရှိပါတယ်. သင်ဟာနည်းပညာပိုင်းအတွင်း CFA စာမေးပွဲဖြေဆိုဖြည့်စွက်ပေးနိုငျပမေဲ့ 18 လများ (level 1 ဒီဇင်ဘာလတွင်, level2ဇူလိုင်လထဲမှာ, level3ဇွန်လအတွက်တစ်နှစ်အကြာတွင်), အများဆုံးကိုယ်စားလှယ်လောင်းယူ4အဆိုပါစာမေးပွဲများပြီးစီးရန်နှစ်ပေါင်း. ဒါဟာတကြ် CPA ထက် CFA ဖြစ်လာဖို့အများကြီးပိုရှည်ကြာ. သငျသညျရှိသည်ရန်လိုအပ်သည်4အဆိုပါ CFA သတ်မှတ်ရေးရရှိရန်သက်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအနှစ်. သင့်ရဲ့ကြီးကြပ်ရေးမှူး, အဘယ်သူသည်သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုအတည်ပြုလိမ့်မည်, တစ်ဦး CFA ဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး.
CFA သို့မဟုတ်တကြ် CPA များအတွက်သွားကြဖို့ရှိမရှိဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာ, သငျသညျကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည့်ပထမနှင့်ဗွေဆော်အရာသည်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖြစ်ပါသည်. မှတပါး, ထို CPA ခေါင်းစဉ်ကိုပိုမိုတင်းကျပ်ပညာရေးနှင့်အတွေ့အကြုံလိုအပ်ချက်ရှိပါတယ်, သင်မူကား, အရည်အချင်းပြည့်ရတစ်ချိန်က, အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုအများကြီးပိုမြန်. CFA တစ်ဦးအနိမ့် entry ကိုအတားအဆီးရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်ဖြည့်စွက်ဖို့အများကြီးပိုရှည်အချိန်ယူ. အဲဒီနှစျခုအကြားအဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ဆုံးမှာသင်နှင့်သင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပန်းတိုင်တက်ဖြစ်. စတင်ခဲ့ပြီးနှင့်အတူ Get အကောင်းဆုံးတကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသင်တန်း သို့မဟုတ် find the best CFA Study Materials
ထိပ်တန်း7CPA REVIEW Courses
သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်: အောက်တိုဘာလ 19, 2018
တကြ် CPA, Wiley CPAexcel, သီးသန့်လျှော့ 33 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
တကြ် CPA, Surgent တကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, သီးသန့်လျှော့ 37 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
နောက်ဆုံးအသုံးပြု 12 လွန်ခဲ့သောမိနစ်အနည်းငယ်က
ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် $500 သို့မဟုတ် 20% Wiley CPAexcel ပလက်တီနမ်နှင့်အတူ
တကြ် CPA, Wiley CPAexcel, အထူးကမ်းလှမ်းချက် 34 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် $500 with our Wiley CPA coupon on the Wiley Platinum CPAexcel course. အဆိုပါပလက်တီနမ်တကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသင်တန်းဘို့ငါတို့ Wiley အထူးနှုန်းများ code ကိုကျေးဇူးတင်ယနေ့တို့သည်ကြီးစွာသောသင်တန်းအပေါ်ပိုက်ဆံ Save. *ဤကမ်းလှမ်းချက်သည်အခြားအထူးလျှော့စျေးနဲ့ပေါင်းစပ်မရနိုင်. See Wiley\_’s website for full details and exclusions.
သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်: အောက်တိုဘာလ 22, 2018
တကြ် CPA, ရော်ဂျာတကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, သီးသန့်လျှော့ 37 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်: အောက်တိုဘာလ 15, 2018
တကြ် CPA, Surgent တကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, နက်ရှိုင်းသောလျှော့ 35 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် $310 off the Fast Forward Academy CPA Smart Bundle course. Use this discount link to save BIG and start your CPA journey today!
နောက်ဆုံးအသုံးပြု7လွန်ခဲ့သောမိနစ်အနည်းငယ်က
တကြ် CPA, အထူးကမ်းလှမ်းချက်, အဆိုပါတကြ် CPA နှိပ်စက် 37 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
တကြ် CPA, ရော်ဂျာတကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, နက်ရှိုင်းသောလျှော့ 39 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
တကြ် CPA, ရော်ဂျာတကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, နက်ရှိုင်းသောလျှော့ 35 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
နောက်ဆုံးအသုံးပြု9လွန်ခဲ့သောမိနစ်အနည်းငယ်က
တကြ် CPA, Yaeger တကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, သီးသန့်လျှော့ 38 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
နောက်ဆုံးအသုံးပြု4လွန်ခဲ့သောမိနစ်အနည်းငယ်က
တကြ် CPA, Gleim တကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, အထူးကမ်းလှမ်းချက် 40 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
50% လျှော့စျေး on Mega Test Bank Set (candidates must purchase all4sections to qualify for the discount). 50% လျှော့စျေး on REG Premium CPA sections. We want to encourage candidates to take REG in 2018 before the exam changes. This offer will also give candidatesa50% discount on our other Premium CPA sections as well, in case they have already taken REG. Please note that this promotion will only apply to ONE Premium CPA section per customer.
နောက်ဆုံးအသုံးပြု 11 လွန်ခဲ့သောမိနစ်အနည်းငယ်က
တကြ် CPA, Gryfina, သီးသန့်လျှော့ 35 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
နောက်ဆုံးအသုံးပြု 22 လွန်ခဲ့သောမိနစ်အနည်းငယ်က
သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်: အောက်တိုဘာလ 20, 2018
တကြ် CPA, Gleim တကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, သီးသန့်လျှော့ 41 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
နောက်ဆုံးအသုံးပြု 15 လွန်ခဲ့သောမိနစ်အနည်းငယ်က
တကြ် CPA, Surgent တကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, Webinar 41 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
တကြ် CPA, ရော်ဂျာတကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, ငွေကြေးကမ်းလှမ်းချက် 38 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
တကြ် CPA, Surgent တကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, ငွေကြေးကမ်းလှမ်းချက် 37 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
တကြ် CPA, Surgent တကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, အခမဲ့စမ်းသပ် 39 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်: အောက်တိုဘာလ 16, 2018
တကြ် CPA, ရော်ဂျာတကြ် CPA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, အခြား 35 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
တကြ် CPA, Wiley CPAexcel, အခြား 40 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်